WALAAC: Chelsea Oo Gashay Xaalad Deganaansho La’aan Ah, Hazard Oo Ay Ka Baqayso Inuu U Wareego Real Madrid Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeWararka MaantaWALAAC: Chelsea Oo Gashay Xaalad Deganaansho La’aan Ah, Hazard Oo Ay Ka Baqayso Inuu U Wareego Real Madrid Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
WALAAC: Chelsea Oo Gashay Xaalad Deganaansho La’aan Ah, Hazard Oo Ay Ka Baqayso Inuu U Wareego Real Madrid Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa uu soo foodsaaray walaac la xidhiidha mustaqbalka laacibkeeda reer Belgium ee Eden Hazard, kaddib markii uu Real Madrid ka tegay xiddigoodii Cristiano Ronaldo oo ku biiray Juventus.
Hazard oo xulka dalka Belgium u horseeday inay gaadhaan marxaladda semi-finalka Koobka Adduunka oo uu ku reebay Faransiisku ayaa waxa uu ka mid yahay saddex ciyaartoy oo lala xidhiidhinayo inay beddel u noqon doonaan Cristiano Ronaldo oo ay u wareegi doonaan Real Madrid.
Eden Hazard, Kylian Mbappe iyo Neymar ayaa si aad ah loola xidhiidhinayaa in midkood ama laba ay tegi doonaan Real Madrid si ay u galaan booska uu Ronaldo banneeyey, waxaase walaac gaar ah uu haystaa Chelsea oo uu dhowaan xiddigeedu bixiyey ishaaro muujinaysa inay suurtogal tahay inuu ka tago.
Bishii May ee sannadkan ayaa uu Hazard warbaahinta u sheegay inuu doonayo inuu ka hoos ciyaaro Zinedine Zidane oo wakhtigaas ahaa macallinka Real Madrid hase yeeshee iska casilay markii uu u qaaday Champions League sannadkii saddexaad oo xidhiidh ah.
Hazard oo ka ciyaartii Faransiiska ay warbaahintu wax ka weydiisay inuu weli ku taagan yahay riyadiisii ahayd inuu Real Madrid tago iyo in kale mar haddii uu Zidane ka tegay, ayaa waxa uu sheegay in xidhashada funaanadda Real Madrid ay tahay riyo uu ciyaartoy kasta doonayo inuu rumeeyo.
“Miyey hoos u dhacaysaa riyadaydii mar haddii uu Zidane tegay? Zidane waa qof gaar ah, waa run, laakiin Real Madrid waa riyada qof walba leeyahay. Zidane oo jooga iyo Zidane oo aan jooginba, shaadhka cad ee Real Madrid waa mid gaar ah.” Sidaas ayuu yidhi Hazard.
Arrintan ayaa waxa ay keentay in Chelsea ay u baqdo mustaqbalka laacibkeeda oo hore loo wariyey in 100 milyan oo Gini ay Los Blancos u diyaarisay lasoo wareeggiddiisa, iyadoo dhinaca kalena ay jirto aragti ah inuu uga jaban yahay Neymar iyo Mbappe.